Mudaaharaadyo Iyo Rasaas Ka Dhacdey Magaalada Hargeysa Kuwaas Oo Dhimasho Iyo Dhaawacba Dhaliyey - Horseed Media
Mudaaharaadyo Iyo Rasaas Ka Dhacdey Magaalada Hargeysa Kuwaas Oo Dhimasho Iyo Dhaawacba Dhaliyey December 6, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogleMagalaada Hargeysa ee Xarunta Maamulka Somaliland ayaa Caawa waxaa ku jirtaa Jawi ka badalan kii hore loogu bartay, Kadib markii uu ka bilowday Qalalaase u dhaxeeya Ciidamada Amaanka ee Maamulka Somaliland iyo dad careysan oo ka soo horjeeda Natiijooyinkii ay soo saareen Gudiga Doorashooyinkii Somaliland.
Qeybo ka mid ah Magaalada Hargeysa ayaa Caawa haawaneysa kadib markii ay Bilaabmeen Mudaaharaadyo Balaaran oo ay dhigayaan Dad Careysan oo ka soo Horjeeda qaabkii loo maareeyo Doorashoyinkii Golaha Deegaanka Somaliland.
Mudaaharaadyada Rabshadaha wata ayaa ka bilowdey xaafadda Axmed Dhagax (Axmed Gurey), kadib ciidamo amaanka ka tirsan ayaa rasaas huwiyey dadkii mudaaharaadka dhigayey waxaana horseed Media loo xaqiijiyey dhimashada wiil yar oo 8 sano jir ah sidoo kale waxaa ku dhaawacmey laba qof kale.
Hooyo kamid ah dadka ku dhaqan Xaafadda Axmed Dhagax (Axmed Gurey) waxay ku tilmaantey waxa ka dhacay Hargeysa Dagaal dhaawaca la kala gurayo.
Wararka ka imaanaya Magaalada Hargeysa ayaa waxaa kaloo ay sheegayaan in Meelaha qaar laga Maqlayo dhawaqa Rasaasta ay Ridiyaan Ciidamada Amaanka ee Magaalada Hargeysa iyo Dadka Careysan ee ka soo horjeeda oo iyaguna ugu jawaabayo dhagaxan.
Dad fara badan oo careysan oo taagersan xisbiyada qaar ee iyagu ka haray doorashooyinkii Golaha Deegaanka ee Somaliland, ayaa isugu soo baxay Jidadka waa weyn ee Magaalada Hargeysa kadib markii ay Ka Caroodeen Natiijinkii ay Galabta ka soo baxay Tirintii Codadka ee Magaalada Hargeysa .
Rasaasta xoogan ee magaalada Hargeysa ka socoto ayaa sidoo kale sababtay in ay xirmaan inta badan adeegyadii bulshada ee magaalada sida suuqii ugu weynaa iyo Buunadad weyn ee Magaalada Hargeysa .
Si kastaba ha ahaate Dadkii Magaalada Hargeysa Deganaa ayaa la sheegay in ay Guryahooda ku jiraan, Waxaana weli socda isku dhacyo u dhaxeeya Ciidamada amaanka ee magaalada Hargeysa iyo dad Careysan.
Galabta ayaa gudiga Doorashooyinka Somaliland ay ku dhawaaqeen Natiijooyinka ka soo baxay Doorashooyinkii Golaha Deegaanka ee dhowaan Somaliland ka dhacay , waxeyna sheegeen in Xisbiyada Kulmiye, Wadani, iyo Ucid ay ku so Baxeen Cododkii ay dhiibteen dadka Reer Somaliland.
Kuraasta Golaha deegaanka ee Hargeysa ayaa ahaa 25 Kursi waxaana Xisbiyadu u kala heleen sidan:
1-Kaalinta koowaad Xisbiga Kulmiye oo helay 7 Kursi
2-Kaalinta Labaad Xisbiga Ucid oo helay cod 4 kursi
3-Kaalinta sadexaad Ururka Wadani oo Helay 4 Kursi
4-Kaalinta Afraadna Ururka Xaqsoor oo helay 4 Kursi
5-Kaalinta Shanaadna ururka Umadda oo helay 3 Kursi
6-Kaalinta Lixaadna Ururka Dalsan oo helay 2 kursi
7-Kaalinta Todobaadna ururka Rays oo helay 1 kursi